कोरोना लागेपछि के खाने, के नखाने ? – Sky News Nepal
कोरोना लागेपछि के खाने, के नखाने ?
१ कार्तिक २०७७, शनिबार १३:५४ मा प्रकाशित
अलिअलि भन्दाभन्दै नेपालमा पनि कोरोना पोजेटिभ हुनेको संख्या उल्लेख्य रूपमा दिनानुदिन बढिरहेको छ । हिजोको दिनमा १–२ भनेर गनिने संक्रमित अहिले सय हुँदै हजारको संख्यामा दिन प्रतिदिन बढिरहेका छन् । अस्पतालमा बेड र आईसीयू नपुग हुँदा पछिल्लो समय अधिकांश सर्वसाधारण आफ्नै घरलाई आइसोलेसन बनाएर बसेका छन् । अनपेक्षित रूपमा ह्वातै कोरोना बिरामी बढ्न थालेलगत्तै के खाने कसरी बच्ने भन्ने चिन्ताको विषय पनि त्यतिकै चर्चामा छ । कोरोना पोजेटिभ हुँदा शरीरमा रोग प्रतिरोधात्मक (इम्युनिटी) क्षमता कम हुने हुँदा यस्तो अवस्थामा अलि भिन्न खालको ताजा र स्वस्थ खालको नियमित सन्तुलित आहार (ब्यालेन्स डाइट) जरुरी पर्ने हुन्छ । हामीले भोगेका र विज्ञको सल्लाहलाई मिश्रण गरी यहाँ बिहानदेखि बेलुका नसुत्ने बेलासम्मको खानालाई क्रमिक रूपमा राखेको छौं । जुन अहिलेको अवस्थामा धेरैलाई उपयोगी सावित हुने आशा गरेका छौं । बिहान समयमा उठ्ने र बेलुका समयमा सुत्ने बानी बसाल्नु अत्यन्त जरुरी छ । बिहान तपाईं ठीक साढे ४ वा ५ बजे उठिसक्दा उत्तम मानिन्छ । नित्य कर्म लगत्तै मनतातो पानी वा हर्बल काडा पानी, बेसार, गुर्जो, बोझो, अदुवा, मरिच, तेजपात, लेमन ग्रास, तुलसी, ज्वानो, जिरा, मेथी, दालचिनी, ल्वाङ, सुकमेल, कागती, कालो नून (बिरे नून) लगायत हालेर बनाउन सकिन्छ र यो बनाउँदा १२–१५ मिनेटसम्म उमाल्नुपर्ने हुन्छ ।
गुलियो, मन पर्नेले कालो नून, शुद्ध मह, मिस्री वा सख्खर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ तर सकेसम्म सेतो नून नखाँदा राम्रो मानिन्छ । यो पानी पटक–पटक गरी २४ घण्टामा ४ वा ५ पटकसम्म पिउन सक्नुहुन्छ । एक पटक पिउँदा ४०० एमएल राम्रो हुन्छ । बेसारले कोरोना छिटो हराउँछ र कोरोना लाग्दैन भनेर मात्राभन्दा ज्यादा सेवन गर्दा भारतमा धेरैको आँखा पहेंलो हुने रोग देखिन थालेका कारण बेसार पनि ठीक्क मात्र सेवन गर्नुपर्ने हुन्छ र सकेसम्म काँचो बेसार राम्रो मानिन्छ । बिहान जुसको रूपमा ताजा किबी, स्विट लाइम (मौसम), चुकन्दर, गाजर, स्याउ, जुनार, सुन्तला उत्तम हुन्छ । जुस मिसाएर पेल्दा केही मात्रामा लेमन जुस र काँचो बेसार मिसाउँदा राम्रो हुन्छ । बिहानको खाजाको रूपमा मकैको रोटी, कोदोको रोटी, फापरको रोटी, मुङ दालको रोटी (चिल्ला), ग्रान्युला मुसली दहीसँग, ओट्स दूधसँग, ब्राउन मल्टी ग्रेन ब्रेड र हर्बल चिया लिँदा राम्रो हुन्छ । बिहानको सुपको रूपमा कुरिलो, ब्रोकाउली, क्यारोट, मुङ, क्वाटी वा बिन स्प्राउटको मात्र लिँदा राम्रो र स्वास्थ्यबद्र्धक हुन्छ । बिहानको ब्रेकफास्ट ८ बजेभित्र गर्दा राम्रो हुन्छ । सन्तुलित खानासँगै योगा वा हल्का शारीरिक व्यायाम पनि गर्न सकिन्छ, जुन बिरामी अवस्था हेरेर गर्नुपर्ने हुन्छ । बिहानको खानामा ताजा तरकारी, दाल (मुङ), ब्राउन राइस, वाइल्ड राइस (रेड राइस), दलिया, सलाद, फ्रेश कट मिक्स फ्रुट खाँदा उत्तम हुन्छ । बिहानको खाना पनि १२ बजेभित्र लिँदा राम्रो मानिन्छ ।
प्रेसर, सुगर वा अन्य कुनै रोग हुनेले केही होस पुर्‍याएर चिकित्सकको सल्लाह अनुसार आफ्नो खानाको सन्तुलन मिलाउनुपर्ने हुन्छ । खाना पकाउँदा जैतुनको तेल वा ताजा शुद्ध घ्यू एकदम कम प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । मसलादार खाना पनि नखाँदा राम्रो मानिन्छ र पिरो बिल्कुल प्रयोग नगर्नु राम्रो हुन्छ । बेला–बेलामा केरा, स्याउ, अभोगाडो, किवी, मेवा जस्ता ताजा फलहरू पनि खाइरहँदा हुन्छ । दिउँसोको खाजाको रूपमा सादा रोटी, ब्राउन्ड ब्रेडको स्यान्डुज, काथी रोल, सोय मिल्क जस्ता हलुका खाना लिँदा हुन्छ । साँझको खाना पनि ९ बजेभित्र लिँदा उत्तम हुन्छ र साँझको डिनरमा ब्राउन राइस र मिक्स भेजको खिचडी, दलिया खिचडी, मुङ दालको खिचडी, ओट्सको खिचडी वा आटाको सादा रोटी र दाल तरकारी खाँदा हुन्छ । साँझको डिनर पनि सकेसम्म हलुका नै लिँदा राम्रो र सुत्नुभन्दा १ डेढ घण्टा अगाडि नै खाँदा राम्रो हुन्छ । बेसार दूध (हल्दी दूध) जसलाई गोल्डन मिल्क पनि भनेर चिनिन्छ । राति सुत्ने बेलामा १ गिलास गोल्डन मिल्क पिएर सुत्दा उत्तम हुन्छ । काजु, बदाम, ओखर जस्ता ड्राइ नट्सहरू पनि बेलाबेलामा नियमित खाने गर्दा राम्रो मानिन्छ । यसले इम्युनिटी पावर बढाउन मद्दत पुर्‍याएको हुन्छ । सकेसम्म भिटामिन सी पर्याप्त पाइने खाना खानु उत्तम हुन्छ र मिलेसम्म एकछिन बिहानको घाममा बस्दा राम्रो हुन्छ ।
कोरोना पोजेटिभ बिरामीले माछामासु खान हुन्छ ?
यदि तपाईंलाई ननभेज खान मन पर्छ भने खान सक्नुहुन्छ तर सन्तुलन मिलाएर ठीक्क मात्र लिँदा राम्रो हुन्छ । ननभेज खाँदा ससेज, अन्डा, कालिज, बट्टाइ, कुखुरा, झिङ्गे माछा वा माछा मात्र लिँदा राम्रो हुन्छ । खसी वा बंगुरको मासुमा ज्यादा चिल्लो हुने हुँदा नखाँदा बेश हुन्छ । यदि खानु नै पर्ने भए तापनि उसिनेर लिँदा राम्रो हुन्छ । सामान्यतया कोराना बिरामीले माछामासु कम नै खाने गरेको पाइन्छ । ताजा तरकारी र फलफूल डाइजेस गर्न पनि सहज हुने हुँदा प्रायः सबैले भेज आहार रोजेको पाइन्छ । डेरी प्रडक्टहरू पनि कम नै प्रयोग गरेको पाइन्छ । अझ चिकित्सकको सल्लाह लिएर सन्तुलित आहार लिँदा झन् राम्रो हुन्छ ।(आर.बी बुढा थोकी/लोकान्तर)